Jimciyada xumaan Reebida & wanaagfarida Puntland oo soo Gabagabaysay sharaxa Qur’anka kariimka – SBC
Jimciyada xumaan Reebida & wanaagfarida Puntland oo soo Gabagabaysay sharaxa Qur’anka kariimka
Jimciyada Wanaag farida iyo xumaan reebida ayaa soo gabangabisay Aqriska Tafsiirka Qur’aanka Kariimka oo muddo Toban bilood ka wadaday xaafada Waabari Ee magaalada Garoowe
Xaflad balaaran oo lagu soo Gunaanudaya dhagaysiga Tafsiirka qur’aanka ayaa waxaa ka soo qayb galay culima’uudiin,waxgarad ,dhaliyaro iyo haween ku Xirnaa AQriska sharaxa qur’aanka kariimka.
Gudoomiyaha jimciyada xumaan Reebida iyo Wanaag farida Deegaanada puntland:sheekh maxamed yuusuf Nuur oo ka hadlay ayaa waxaa uu sharaxaad ka bixiyay barnaamijka iyo inta uu soo socday Aqriska Tafriiska Qur’aanka kariimka ah iyo sida ay u soo wadeen mudadii ay wadeen wacyigalinta wanaagsan.
madaxa jimciyada ayaa waxaa uu intaasi ku daray in jimciyada ay xarumo wanag farada iyo xumaan Reebida ay ku leeyihiin deegaano kale oo ka baxsan magaalada Garoowe kuwaasi oo ay ka mid yihiin Sunajiif,xasbaalle,Gudubjiiraan,shaxda ,qardho iyo Gaalkacayo iyadoona ay sheegay in ay sii wadayaan wanaag farada bulshada xumaantana ay ka wacyi galindoonaan.
Intii ay soctay xaflada lagu soo gabagabay nayay sharaxa qur’aanka kariim ayaa waxaa Dadkii ka soo qayb galay waxaa goobta lagu gudoonsiiyay Kutaabo oo ay gudoomeen,waxaana goobta duco loogu Aqriyay dadka ku tixnaa madadii uu socday Tafriiska qur’aanka kariimka iyo dadkii soo Agaasimay wanaagfarada iyo xumaan reebida.
Jimciyada ayaa waxaa ay mudooyinkii ugu dambeeyay ay deegaanada puntland ay ka waday wacyigalinta xumaan reebida dadka ku dhaqan deegaanada puntland iyadoona ay san ahan markkii ugu horaysay ee jimciyada ay soo Afmeerto Fahamka sharaxa qur’aanka kariimka.
Cabdi caziiz Ibraahim Axmed (Cabdi caziizokey)